Warshadda jumlada jumlada sanduuqa jumlada ah ee 100 tiriyey tirinta nadiifinta bakteeriyada xayawaanka eeyaha iyo bisadaha Alaab-qeybiye iyo Soo-saare | Kafiican
Magaca Product: Nadiifinta Nadiifinta Xayawaanada
Lambarka Moodalka: QMSJ-323
Maaddooyinka firfircoon: Biyo la sifeeyey, Cetylpyridinium Chloride, Glycerin, Polysorbate 20, G2TAM, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-1, Aloe Extract, Vitamin E, Chamomile
Cabir: 7 '* 8'
Tiri sanduuq kasta: 100 tiriyaa
MOQ: 1000 sanduuq
Masaxaadda eyda lidka ku ah bakteeriyada ma masaxi karto oo keliya xayawaanka xayawaanka, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa wajiga, Dhagaha, Maqaarka, Koodhka, Ilkaha, iwm. Waxaa loo isticmaali karaa jirka oo dhan xayawaanka, dhammaan masaxa eeyga dabiiciga ah. Waxay ka kooban tahay soosaaraad aloe vera ah si ay xayawaankaaga xayawaan cusub u yeelaan. Oo kani waa eey aan udgoon lahayn ayaa masaxa masaxa xayawaanka.
Masaxa bakteeriyada waxaa isticmaali kara bisadaha iyo eyda. Markii aad eyga oo dhan ku dhex socotey eeygaaga, cagihiisa waxaa wasakheeyay wasakh iyo bakteeriya. Waqtigaan, tirtirka eeygan ayaa kaa caawin kara inaad dhaqso u nadiifiso eeygaaga, si uusan u wasakheynin dabaqaaga iyo fadhiga marka uu guriga yimaado. Marka bisadaadu dhammeyso maalintiisa safarka, sidoo kale waad nadiifin kartaa.
Markuu tirtirmay qoyaankan qoyan, waxaa jeclaa macaamiisha. Waxaan ka helnay jawaab celin wanaagsan qoysas badan. Waxay soo sheegeen inay ku jeclaadeen sheygan oo ay yiraahdeen ma sameyn karno la'aanteed xayawaankan xayawaanka ah noloshooda.
Maskaxda eyda oo la nabaad guuri karo ayaa aad ugu habboon isticmaalka qoyska. Sanduuqa wax lagu rido ayaa ku habboon in la dhigo oo aan fududayn in la garaaco. Marada tirtirta ee qoyan waa mid baaxad weyn leh (7 * 8 inji), oo wasakhda ku tirtiri karta aag aad u ballaadhan oo ku habboon in la isticmaalo. Isla mar ahaantaana waxaan sidoo kale taageernaa adeegyo habeysan. Haddii aad rabto inaad isticmaasho astaantaada gaarka ah, waxaad haysaa talo soo jeedin fiican oo ku saabsan cabirka iyo dharka masaxada, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
* 100% Qanacsanaanta & Hubinta Tayada
Qanacsanaantaadu waa mudnaantayada koowaad. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan si xor ah nala soo xiriir, waxaan kaa caawin doonaa inaad ku xalliso 24 saacadood gudahood.
KEECP KA SII BAXA CARRUURTA
Hore: Warshad OEM awood balaaran 750 ayaa tirisa tirtirida tirtiridda bakteeriyada jeermiska badan
Xiga: Habee si fudud waxtar leh u nadiifi masaxyada kabaha cad iyo maqaar
tirtiro dhammaan eeyaha dabiiciga ah
masaxda eyda antibacterial
masaxa antifungal eeyaha
masaxda bakteeriyada eeyaha
masaxa eeyaha ugu fiican ee lugaha
masaxa eyda la baabiin karo
masaxa nadaafada eyga
Dabiiciga hypoallergenic nabdoon saaxiibtinimo 200 tirinta ...